Factory Tour - Kingsine Electric Automation Co., Ltd.
Production Management dia mampahafantatra ny fitantanana ny maodilo mba hahazoana antoka fa ny rohy famokarana rehetra, ao anatin'izany ny fandaharam-potoana, ny fividianana, ny famokarana, ny kalitao, ny fitaovana, ny fitehirizana sns, dia afaka mihazakazaka tsara sy mahomby.
Amin'ny alàlan'ny fivoarana sy fanangonana mihoatra ny 10 taona, namorona famokarana tonga lafatra sy rafitra fitantanana kalitao ISO9001: 2008 izahay. Mba hahafahantsika miantoka ny kalitaon'ny vokatra, ny habetsany ary ny vanim-potoana natolotra.
Ny fanandramana mandroso sy ny fitaovana famokarana dia manatsara bebe kokoa ny tahan'ny famokarana ary miantoka ny kalitaonay.
Kingsine dia manolotra karazana rindrambaiko rindrambaiko izay namboarina mba hanomezana asa mora sy ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fanaingoana ny kapila AC.
Ny sasany amin'izy ireo dia fitaovana mifototra amin'ny tranonkala; ny hafa kosa dia programa tsy miankina izay mila apetraka amin'ny PC-nao. Ankoatr'izay, misy fitaovana fampifanarahana refy sy rafitra izay azo alaina ho an'ny mpikambana ao amin'ny Programme Partner Kingsine. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba ny programa eto.
Mba hanampiana anao hahazo tombony betsaka amin'ny fiaraha-miasa amin'izy ireo, ny fitaovana tsirairay dia manana torolàlana ho an'ny mpampiasa.
Mba hanamorana ny fahafahanao mamantatra ilay fitaovana mifandraika amin'izany, dia navondrona tamin'ny sokajy samihafa izy ireo arakaraka ny antony hampiasanao azy ireo na hifandraisany amin'ny tombontsoa manokana.
Olona ifandraisana: Miss. Carol
Fiarovana Relay Tester, Fitsapana fampitana niomerika, Fitsapana fampitana mivantana, Fitsapana fampitàna lavitra, Fitsapana fampitàna an-tsokosoko, Fitsapana fampitana, Vokatra rehetra